Xulka cayaaraha | Radio Himilo | Page 5
Home / Xulka cayaaraha (page 5)
PSG oo dooneysa in ay Man City ka dul qaaddo saxiixa laacibka Arsenal ee Alexis Sanchez.
radio himilo December 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 64 Views
Muqdisho – PSG ayaa isku diyaarineysa inay 25 milyan oo ginni ku dalbato bisha Janaayo weeraryahanka Arsenal Alexis Sanchez, sida laga soo xigtay Express Sport. Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Sanchez uu doonayo inuu u dhaqaaqo Manchester City, kuwaas ...
Man Utd oo Real Madrid kula tartameysa doonista xiddiga Chelsea, Eden Hazard.
radio himilo December 20, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 57 Views
Muqdisho – Manchester United ayaa isku diyaarineysa in ay kooxda Real Madridkula tartanto xiddiga ugu muhiimsan kooxda Chelsea ee Eden Hazard, sida ay warineyso the Sun. Hazard iyo macalinka kooxda United-ka Jose Mourinho ayaa horay uga soo wada sheqeeyey Chelsea, ...
Everton oo baacsaneysa laacibka Arsenal ee Theo Walcott.
radio himilo December 20, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 52 Views
Muqdisho – Macalinka kooxda Everton Sam Allardyce ayaa lagu soo warramayaa in uu diiradda saarayo weraryahanka kooxda Arsenal ee Theo Walcott marka uu suuqu dib u furmo bisha January. Xiddiga heerka caalami ee reer England, oo kooxda ka dhisan North ...
Newcastle oo loolanka loogu jiro David Luis kusoo biirtay.
radio himilo December 19, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 40 Views
Muqdisho – Newcastle United ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro xiisaha daafaca Chelsea, David Luis, marka loo eego London Evening Standard . Xiddiga Qaranka Brazil ayaan mudnaan muuqata ka helin gegida Stamford Bridge ee Blues-ka xagaagan, waxaana lala xiriirinayaa kooxaha Arsenal, Real Madrid iyo ...
Pires: “Waxaan doonayaa inaan la shaqeeyo macalin Wenger.”
radio himilo December 19, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 43 Views
Muqdisho – Ruug-cadaagii hore ee Arsenal, Robert Pires ayaa ku celiyay doonistiisa la xiriirta inuu mar un jeclaan lahaa ka dhinac shaqeynta macalin Arsen Wenger Laacibkii hore ee naadiga, wuxuu hadda danjire u yahay Gunners-ka, wuxuuna il-qooraansanayaa sidii uu uga dhinac ...
Terry oo sheegay in Chelsea aysan ka qoomameynin luminta xiddigo dahabi ah xagaagan.
radio himilo December 19, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 53 Views
Muqdisho – Chelsea ayaa qoomamo ka qabin in Mohamed Salah, Kevin De Bruyne iyo Romelu Lukaku ay qeyb ka yihiin naadiyada kula loollamaya horyaalka EPL, sida uu yiri John Terry. Naadiga Blues-ka ayaa siyaasaddeeda is-dhaafsiga xiddigaha ayaa weydiimo ku jira kadib markii ...
Conte: “Van Dijk looma oggolaan karo inuu ku biiro kooxda Man City.”
radio himilo December 18, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 46 Views
Muqdisho – Macalinka Chelsea, Antonio Conte ayaa uga digay loolamayaashiisa EPL, in Manchester City aysan ku dhicin la saxiixashada laacibka Virgil van Dijk oo u ciyaara kooxda Southampton. Tiiyoo xiiso weyn ay u muujinayaan kooxaha Arsenal iyo Liverpool, City ayaa ku ...
Aubameyang oo heshiis hor leh qalinka ku duugay!
radio himilo December 18, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 38 Views
Muqdisho – Pierre-Emerick Aubameyang ayaa qirtay inuu kordhiyay heshiiska uu kula joogo kooxdiisa Borussia Dortmund ilaa 2021, sida uu u sheegay warfidiyeenka Jarmalka. Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya xaggiisa ayaa sheegaya in 28-jirkan uu muddo kordhin u sameeyey joogitaankiisa naadiga Jarmalka. ...
Rooney oo aan qabin in City ay kamid tahay kooxaha abid ugu fiican horyaalka.
radio himilo December 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 43 Views
Muqdisho – Wayne Rooney ayaan wali aaminsanayn in Manchester City ay kamid tahay kooxaha abid ugu fiican horyaalka taariikhdiisa. City waxay 4-1 ku dhirbaaxday kooxda Tottenham taas oo dhigtay 14 dhibcood oo nadiif ah inay kaga sarreeyaan kooxda kusoo xigta ...
Barcelona oo la kulantay qoyska GRIEZMANN.
radio himilo December 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 53 Views
Muqdisho – Barcelona ayaa sameynaysa dadaal adag si ay kula saxiixato laacibka Antonio Griezman. Waxayna madal casho ah la qaateen qoyska laacibkan, marka loo eego Mundo Deportivo. Waxaa jira warar ku tiri-ku-teen ah oo laacibkan la xiriirinaya dhinaca Old Trafford, laakiin ...